ungoogled-chromium, iyo "yepamutemo" chromium isina zvisungo zveGoogle | Linux Vakapindwa muropa
ungoogled-chromium, iyo "yepamutemo" chromium isina zvisungo zveGoogle
Kunyangwe vazhinji vashandisi veLinux vakasarudza Firefox, iyo yakanyanya kushandiswa webhu bhurawuza pasirese Chrome. Yakagadzirwa neGoogle, haisiyo yakanyanya kunaka sarudzo kana tichifarira zvakavanzika, asi neinjini imwechete isu tine zvimwe sarudzo senge Brave, Opera kana Dot Bhurawuza, diki browser inoshandisa iyo Chromium injini, asi yakafunga kuenda kure kure nekambani yebrowser sezvinobvira. Pane imwe sarudzo ine imwecheteyo uzivi, a ungoogled-chromium inotaridzika zvakatowanda seyakarehwa Chromium.
Kusiyana neDot Bhurawuza, iyo ine yayo mufananidzo uye sarudzo senge yekupaza skrini, ungoogled-chromium ine mufananidzo wakafanana neiyo yekutanga Chromium, iyo iyo vashandisi veUbuntu vasingachagone kumisikidza isina hunyengeri kana isiri yavo snap package (kubva svondo rapfuura, iri zvakare paFlathub). Izvo zvakagadziriswa nemugadziri wayo kutora kodhi uye kubvisa zvese zvaaigona kubva kuGoogle, sezvatinogona kuverenga mukati yako GitHub peji.
1 Hunhu hwe ungoogled-chromium
2 Inowanikwa yeWindows, Linux, macOS, uye Android
Hunhu hwe ungoogled-chromium
Iyo Chromium isingabvi paGoogle webhu masevhisi.
Chengetedza iyo Chromium chiitiko kwenguva yakareba sezvazvinogona.
Shanduko dzekuvandudza kuvanzika, kutonga uye pachena. Mazhinji eaya sarudzo anogona kumiswazve.
Yakabvisa zvese zvakasara zvikumbiro zvekumashure kune chero webhu webhu paunenge uchigadzira nekumhanyisa browser, ese kodhi yakanangana neGoogle webhu masevhisi, uye ese mashandisirwo eakavakirwa-sosi kodhi kodhi mabhainari uye anoitsiva nedzimwe nzira dzinopihwa nevashandisi pazvinogona.
Zvimiro zvinodzivisa kudzora uye kujekesa zvakaremara, uye maficha anovasimudzira anogona kuwedzerwa kana kuchinjwa (shanduko idzi dzinenge dzichigara dzichida kushandiswa kwemanyorerwo kana kugoneswa).
Bvisa zvikumbiro kubva kuGoogle.
Wedzera iyo Mazano URL mavara munda mune yekutsvaga injini edhita (chrome: // marongero / tsvagaEngines) kugadzirisa maitiro ekutsvaga enjini.
Yakawedzera mamwe ma URL zvirongwa zvinobvumidzwa kuchengetedza zvirongwa zvepeji.
Wedzera Omnibox yekutsvaga mupi "Hapana kutsvaga" kubvumira kutsvaga kuremadza.
Wedzera tsika yekuyambuka-chikuva kuvaka kumisikidza uye kurongedza chiputira cheChromium. Parizvino inotsigira akawanda Linux, macOS, uye Windows kugoverwa.
Kumanikidza ese pop-ups mumatebhu.
Dzima otomatiki URL fomati muOmnibox (semuenzaniso, bvisa http: // kana kuvanza mamwe ma parameter).
Inoremadza iyo intranet redirect detector (inoshamisa DNS zvikumbiro). Izvi zvinopaza kutapwa kwevasungwa, asi maseru evatambi achiri kushanda.
(Iridium browser chinja chinja) Inodzivirira ma URL neiyo trk: chirongwa kubva pakubatana neInternet.
Iyo zvakare inodzivirira chero URL neiyo yepamusoro-chikamu duraini qjz9zk (sekushandiswa kwazvinoita kudomain substitution) kubva kuyedza kubatana.
(Iridium uye Inox Characteristics Shanduko) Inodzivirira IPv6 kero ping panowanikwa IPv6 kuwanikwa. Ona iyo -set-ipv6-probe-nhema mureza pamusoro kugadzirisa maitiro.
(Windows chaiyo) Haigadzike chinongedzo chezoni pamafaera akadhawunirodwa.
Inowanikwa yeWindows, Linux, macOS, uye Android
ungoogled-chromium iri inowanikwa kune desktop uye Android masisitimu, kunyange iri muGoogle's mobile operating system inofanirwa kuitora kubva F-Droid. Vashandisi veLinux vanogona kuiisa nenzira dzakasiyana, yakanyanya kuve Flatpak package, inowanikwa pa Iyi link naFlathub. Uyezve, inogona zvakare kuiswa nenzira idzi:
Arch Linux: Inoonekwa muAUR seisina kuvharwa-chromium.
Debian / Ubuntu: inowanikwa mu OBS, kubva kwatinogona kuverenga mirairo yekuiisa mukugovera kwedu.
Fedora: inowanikwa mu RPMFusion kunge chromium-browser-kuvanzika.
Gentoo: inowanikwa mu :: pf4public seisina kuvharwa-chromium.
Nezve iro rinowanikwa vhezheni, izvozvi tinogona kurodha ungoogled-chromium 87, iri iyo vhezheni yakavakirwa pane yazvino Chromium kuburitswa. Pamwe pacho mukana wekuti bhurawuza rigadziridzwe nguva pfupi yapfuura mushure mekuburitswa zviri pamutemo, kuti tikwanise kunakidzwa nekutendeka kweChromium chiitiko neku "kubiridzira" paGoogle nekudaro tichidzivirira zvakavanzika zvedu. Kana mumwe munhu achifunga kuti chirongwa chidiki uye asingavimbe nacho kana vakachirega munguva pfupi iri kutevera, unoziva, Chromium inowanikwa mune mamwe mabhurawuza mazhinji, kusanganisira iyo Chrome yatinoedza kupukunyuka mune ino posvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » ungoogled-chromium, iyo "yepamutemo" chromium isina zvisungo zveGoogle
Iyi Google haigone kuisa zvimiro zvayo, mabhuroko kana zvichemo, nekuti hazvisanganisi chero chinhu chavo haha
Raspberry Pi OS: kuburitswa kutsva nekuvandudzwa kwekuteerera uye kudhinda rutsigiro